देशको नयाँ संहिता (कविता)
२o७५ भदौ २ शनिबार
झरी परेर निध्रुक्क भएको बेला
देशमा जंगे युग समाप्त भयो
अर्थात देशले नयाँ संहिता पायो.....!
सोच्दै छु, चेलीको आर्तनादनमा
यो संहिता मल्हम बन्छ कि बन्दैन,
कि यो हिमनदी जस्तै बगिरहन्छ,
बेपर्वाह,रोग,भोक र शोक गर्भमा बोकेर..!!
राष्ट्रको जीवनमा हर उचाई
सगरमाथा मात्र हुंदैन,
कहिले काहीं ती उचाईहरु मकालु,
धौलागिरी र कञ्चनजंघा पनि बनिदिन्छन
यो वेगमा ,एउटा उचाई बनेर
देशले कानुनका नयाँ बर्खे इतिहास रच्यो
यो ईतिहासमा पर्दा पछाडीको मेरो सभ्यता,
मेरो आदर्श र मेरो दुर्दिनहरुको कति मुल्य हुन्छ।
आज फुत्किरहेको बन्धन
र हाँस्दैखेल्दै गरेको गणतन्त्रको रथी को हो ?
संहिता,सभ्यता वा हाम्रो दर्शन ...?
यसरी एउटा दुस्पप्न ,
स्वतन्त्रताले सिमा नाघेपछी सुरु हुन्छ ।
एउटा अन्त्यको कारक भएर
यो संहिताको, कुन शब्दको भाग्य चम्किन्छ ?
त्यती खेर हृदयहरु उत्सवको तयारीमा
पर्खिरहेका हुनेछन ।
एउटा योद्धाको छोरोलाई चिठी (कविता)
प्रिय छोरो, अटल विद्रोही म तिम्रो एक योद्धा बाबू ! तिम्रो पृथ्वीभन्दा माथिको स्वर्गबाट हिजोका मेरा अधुरा सपना र आजका तिम्रा अपुरा सपना नियालिरहेको म तिम्रो सपनाको बगैँचामा फुल्दै गरेका फूलहरुको माली ! परमधाम भएको वर्षौपछि आज तिम्लाइ केही भन्ने
म मरेको दिन (कविता)
आज म मरेको दिन मेरो शरीर लास भएर सुताएको छ आँगनभरि नै मान्छे नै मान्छे छरिएका छन् मेरो आँखा बन्द छ श्वासप्रश्वास चलेकै छैन जब श्वास शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ त्यो लास बन्छ मलाई थाहा छ म मरेको छु तर , भित्र
सन्दीप ज्ञवालीका तीन कविता : म सहिद, यो जिन्दगी र सपना !
१. म सहिद गोली चल्यो घाइते भएँ ए आमा ! म मरेर गएँ । मृत शरीर चुरा फुट्यो, ए पियारी ! सारा सपना टुट्यो । जल्यो लास भए खरानी , ए मेररी माया ! खोसियो तिम्रो जवानी । फोटोमा हार बाबु अनायासै, ए छोराछोरी ! नरोउ न
मेरो चाहना त म ‘म’ भएरै तिम्री बन्ने थियो त्यसैले त सुदूरको गाउँबाट~दूरको तिम्रो सहर आइपुग्दासम्म म ? - म थिएँ जस्तो कि, जून सिर्फ जून हुन्छे जूनकीरी सिर्फ जूनकीरी जून र जूनकीरिको दाँजो असुहाउँदो अवस्य हुन्छ त्यस्तै असुहाउँदो थियो पहाड-पहाड